Ny orinasa mamokatra indrindra indrindra: nylon tie, Stainless vy tie, Steel fantsika tariby karatra, tantera-drano tariby fihary, alalan'ny terminal andian-tsoratra, faritra mpandika, manondro metatra, Hafanàm-po an metatra sy hery metatra sns Products no be mpampiasa sy ny tolotra: milina, hery, elektronika, fifandraisana, miaramila, fifehezana, mpampatsiro hanina, orinasa, jiro, ny fitaterana sy ny lalamby orinasa hafa. Products no naondrana any Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Moyen-Orient, Afrika sy Azia Atsimoatsinanana, toy ny firenena mihoatra ny 90 sy ny faritra.
Ny orinasa manarona ny faritra 17000 metatra toradroa, mihoatra ny 500 mpiasa. Mety fitaterana, akaikin'i Shanghai, Ningbo sy ny seranana hafa. Ny orinasa matanjaka manana pamokarana sy ny famoronana, dia lasa matihanina, goavana sy ny orinasa mpamokatra entana, foibe orinasa toy ny anankiray amin'ny fanondranana vokatra.
Ny orinasa hampiditra Mbola nandroso sy matihanina famokarana fitaovana ara-teknika sy fitantanana manokana, mba hahazoana antoka avo kalitao ny vokatra sy ny mpanjifa fahafaham-po. Ny orinasa dia nahazo ISO9001 rafitra fanamarinana kalitao sy ny CCC, CMC, SGS, taona, KEMA, ROHS, CB sy BV sy ireo an-toerana sy iraisam-pirenena fanamarinana.
Ny orinasa handova ny fanompoana tanjona ny "toetra voalohany, miorina amin'ny voninahitra, mpanjifa ny tena", amin'ny fo manontolo amin'ny hoavy tsara tarehy mamorona Taloha sy Vaovao tanana mpanjifa an-tanana.